ဘောလုံးလောကရဲ့ အကျော်အမော David Beckham ရဲ့ သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Cruz Beckham နဲ့ Romeo Beckham တို့ကတော့ London မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Taylor ရဲ့ Reputation Tour ကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Cruz နဲ့ Romeo တို့ကတော့ Taylor ရဲ့ Tour ကို သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို Instagram မှာ အသီးသီးတင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး Taylor နဲ့ တယောက်ချင်းစီ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တင်ခဲ့ကြတာပါ။
What an amazing concert congratulations @taylorswift so inspirational ??
ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်လုံးကလည်း အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ Show ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း Taylor ကို ချီးကျူးထားပါသေးတယ်။ 2017 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Taylor ရဲ့6ခုမြောက် album ဖြစ်တဲ့ REPUTATION ဟာ အရောင်းရဆုံး Album အနေနဲ့ BBMAs ကို ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ Reputation ရဲ့ ပထမဦးဆုံး သီချင်း Look What You Made Me Do ဟာဆိုရင်လဲ 24 နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူအများဆုံးစံချိန်ကို တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ Taylor ဟာ Stadium Tour ကို May လ ၈ ရက်နေ့ထဲကနေ စတင် လှည့်လည်ဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ။ ဝင်ငွေတွေလဲ မနည်းရရှိခဲ့ပြီး စစဦးဆုံး ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ University Phoenix Stadium မှာဆိုရင်တော့ Metallica ရဲ့ အမြတ်ငွေနဲ့ One Direction ရဲ့ Attandance Record တို့ကို ချိုးခဲ့ပါသေးတယ်။ Camilla Cabello နဲ့ Charile XCX တို့က Tour Mate အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Shawn Mendes , Selena Gomez , Troye Sivan Robbie Williams တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ London မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Tour မှာတော့ One Direction ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တဲ့ Niall Horon တို့က special guest အနေနဲ့ ပါဝင်ပေးခဲ့တာပါ။
Reputation Stadium Tour ကို November လ အထိ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး Asia မှာဆိုရင်တော့ Japan နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ Tour တလျှောက်မှာရော ဘယ်သူတွေကို special guest အနေနဲ့ ဖိတ်ခေါ်ဦးမလဲ ဘယ် Stadium မှာရော ဘယ်လို Record တွေ ချိုးဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြရအောင်လား။ ။
We’ll see you inafew hours Manchester!! ??? @camila_cabello @charli_xcx ? @Hogieaaa @GettyEntertainment
Music Newstaylortour news
PREVIOUS POST Previous post: Japan Rock Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ONE OK ROCK ရဲ့ Music Video အသစ်ထွက်ရှိလာ
NEXT POST Next post: Album အသစ်အတွက် အလန်းလွန်စွာ ကြော်ငြာဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ Christina Aguilera